The user who posted this advertisement has been banned due to violation of Terms. ::: iMyanmarHouse.com
01248209, 09420097550, 09781139940
The user who posted this advertisement has been banned due to violation of Terms.
ပန်းပဲတန်းမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ
၂၅ ပေ×၅၀ပေ၊ (26) လမ်း ၄ လွှာတိုက်ခန်း (အသင့်နေနိုင်)
1,000 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
၆၀၀ စတုရန်းပေ၊ United Condo (အသင့်နေထိုင်နိုင်)
6,000 သိန်း (ကျပ်) | ကွန်ဒို
1,570 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း
* 900sqft, ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် Thein Group Condoတွင် တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
1,680 သိန်း (ကျပ်) | ကွန်ဒို
5,500 သိန်း (ကျပ်) | တိုက်ခန်း